Ukunikeza i-aspirin yakho yekati, okuthile okuyingozi kepha kungenzeka | Amakati kaNoti
Ukunikeza i-aspirin yekati lakho, okuthile okuyingozi kepha kungenzeka
Lapho ikati lethu likhombisa izimpawu zokugula, kubalulekile ukuthi sikugweme ukuzelapha, ngoba singagcina senza isimo sibe sibi kakhulu. Abanye imithi Kungenzeka zingabekezelelwa ngumzimba walezi zilwane, ngoba zinezinto ezivimbela imetabolism nomzimba wazo ekuziqedeni. Lolu hlobo lomuthi yi-aspirin.
Uma ungazi, enye ye- imithi eyingozi kakhulu ongayinika amakatiYi-aspirin, ikakhulukazi uma sibanika yona singazi ukuthi ungagcina kanjani ngokuqeda impilo yabo. I-Aspirin ingahlala emzimbeni wekati izinsuku ngaphambi kokukhishwa. Futhi, uma siyinika inani elilinganayo le-aspirin elithathwa ngabantu lapho sigula, sizobe senza isimo sibe nzima.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ikati elidakiwe ngalo i-aspirin Kungasinda, kepha indlela ephephile yokuyisebenzisa itholakele, yize ngihlala ngincoma ukuthi ubonane nodokotela wezilwane nokuthi ngaphambi kokunikeza noma yiluphi uhlobo lomuthi ozosetshenziswa ngabantu, khuluma nodokotela kuqala, ukuze wazi kahle ukuthi kanjani futhi nini ukuyiphatha.
Imithamo esiyinikeza i-aspirin, ukuze iphephe, kufanele ibe ngama-milligram ayi-10 kuye kwangama-20 ngekhilogremu yesisindo sekati lakho, futhi kufanele inikezwe njalo emahoreni angama-48 uma kunesidingo, ukuyinika isikhathi esidingekayo sokuziqeda. Khumbula ukuthi iphilisi ngalinye le-aspirin liqukethe ama-milligram angama-500 ngakho-ke kufanele ulinganise ukusika kahle kakhulu ukuze unganiki okuningi kwalokho umthamo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amakati kaNoti » Amakati » Curiosities » Ukunikeza i-aspirin yekati lakho, okuthile okuyingozi kepha kungenzeka
Yelapha ukopha ekati lethu